Ra'iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka Al-Shabaab kaddib Qaraxii Zoobe | SAHAN ONLINE
Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya oo ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka Al-Shabaab kaddib Qaraxii Zoobe
MUQDISHO – Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna xilligan Xildhibaan ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka Al-Shabaab kaddib Qaraxii Zoobe.
Dr Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in wixii khilaaf ah oo u dhaxeeya Soomaalida dhexdeeda meel la iska dhigo oo meel looga soo wada jeesto waxa uu ugu yeeray cadowga dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waxa uu tacsi u diray eheladii dadkii ku dhaawacmay qaraxii Zoobe ee magaalada Muqdisho kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 300 qof,tiro intaas ka badana ay ku dhaawacmeen.
Sidoo kalwe waxa uu sheegay in la joogo maanta waqtigii ummada Soomaaliyeed cashar ka baran lahayd qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay soo maleegayaan cadowga ummada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay ka qeybgalay isu soo bax ballaaran oo ka dhacay garoonka cayaaraha Koonis ,halkaasoo looga soo horjeeday qaraxii Muqdisho ayaa sheegay iney jiraan siyaasiyiin Soomaaliyeed oo la shaqeeya wadamo shisheeye,wuxuu ku baaqay in meel la iska dhigo wixii khilaaf ah ee jira oo meel looga wada jeesto cadowga Ummada Soomaaliyeed oo uu ku sheegay Al-Shabaab.
Hoos ka dhageyso Waraysi uu siiyey VOA